कृषमायाको उदाहरणीय सजगता | मझेरी डट कम
कृषमायाको उदाहरणीय सजगता
Biju Subedi — Wed, 10/28/2020 - 17:06
चौथोपटक कोरोनाले गाल्दा कृषमायाको मनोभाव यसरी दौडिरहेको थियो, “यो सय वर्षरुपी छोटो जिन्दगीमा ‘मैले मात्र नै किन यत्ति सारो कष्ट झेल्नजुपर्ने ?’भन्ने पीडा एकातिर हुादोरहेछ भने अर्कोतिर त्योभन्दा पनि कष्ट झेलिरहेर पनि हाासीहाँसी पीडा पचाएर बााच्नेहरुको उमङ्ग देख्दा एउटा उर्जा पलाउँदो रहेछ । त्यही उर्जाको सिन्को पनि डुब्न लागेको जिन्दगीको डुङ्गा बनिदिँदो रहेछ र सफलतातिर पार लगाउँदा रहेछन् अनि दुःख झेल्ने शक्ति पलाउँदो रहेछ । तर जस्तै भए पनि यी उर्जा दिने अनि हाँसीहाँसी कष्ट झेल्ने महानुभावहरु मेरा नजरमा शहीद नै हुन् । मेरो उहाँहरुप्रति उच्च सम्मान छ । उहाँहरुका लागि राज्यले सके राज्यले अनि हामीले सके हामीले आफ्ना दुःखकष्टहरु बिर्सेर सहयोग एवम् मद्दतमा लम्कन सक्यौँ भने, त्यो मार्गमा सदाचार भई लाग्न सक्यौँ भने हाम्रो देश कायापलट हुनेमा दुईमत नहोला । सबैले यसै गरी सोच्नु र व्यवहारमा लागू गर्नु आजको समयको माग हो, टड्कारो आवश्यकता हो ।”
कारोनाको पीडा बीच पनि देश र जनताका बारेमा आजको समयसन्दर्भका कुराहरु यत्ति सोचेर लेखिसकेपछि उनले आफ्नो डायरी बन्द गरिन् ।
क्वारेन्टाइनमा उनलाई बस्न त मन थियो तर उनी बसेनन् । किनकी यो कोरोनाको उपचार अझै पत्ता लागेको छैन । खालि आराम दिएर राखेर पोषिला खानाले इमिनिटी पावर बढाउने न हो । उनलाई थाहा थियो यो तेस्रोविश्वको क्वारेन्टाइन अनि आइसोलेसन कस्तो छ ? भनेर किनकी यहाँ बढी क्वारेन्टाइनमै कोरोाना सरिरहेको थियो भने भोको पेट अनि कहिलेकाहीँ चाउचाउको सानो १ प्याकेटको राहतले झन् निमुखाहरुलाई उराठिलो पारेको थियो । विदेशमा क्वारेन्टाइनमा खाना बस्न राज्यले दिन्थ्यो तर स्वदेशमा यो भएन । यत्ति अन्वेषणले पत्ता लगाइसकेपछि नागरिकहरु फेरि विदेशमा जान तााती नै लागे । उनले यस्ता मेसोहरु नियालिरहेकी थिइन्। विचरा ! केही नभएका निमुखाहरुले मृत्यु होला भनी आर डि टी, पिसिआर टेष्टमै ठुलो सम्पत्ति खेर फाले अनि पोषिला खानाको जोहो गर्न सकेनन् । किनकी उनीहरुले जेनतेन महिनाको ४ हजार जत्ति जुटाउन सकसले सक्थे ।
यसरी नियाली रहेकी कृषमायाको पनि हालत उस्तै थियो । उनले यो लकडोनभरि यो महामारीले आफ्नो प्राण जाला भनी धेरै हतास भई । तर कोरोनाको लक्षण नभएकाले आफ्नो प्राण जोगिएकोमा सन्तोषको सास फेरी । पहिलोपल्ट कारोनाले गाँज्दा उनलाई खान मन नलाग्ने । जे खाए पनि मीठो नहुने । ज्वरो कट्कट् आउने । सास फेर्न गारो हुने । अनि पातलो दिसा पनि हुन थाल्यो । सुख्खा खाेकी आइरहने । यी लक्षणहरू हेरी उनले इन्टनेटभरि भिडिायोहरु सर्च गरिन् । आखिर उनको यो लक्षण कोरोनासँग ठ्याक्कै मिल्ने भयो । अब उनमा विकल्प थियो कि, कि उनले भोकै बसेर पिसिआर, आर्डिटी चेक गरी ४००० सकाउने कि भएको ४०००ले पौष्टिक खाना खाई आराम गरी आफ्नै कोठामा बस्ने ? उनले दोस्रो विकल्प रोजी ।
दोस्रोपल्ट विसेक भइसकेपछि फेरि कोरोनाले गाँज्दा पनि बजारमा गएर उनले ज्वरोको, टाउको दुखेकोको, आउँको, दिसा पातलो भएकोको, निन्द्राको आदि औषधि किनेर ल्याई । आफुलाई परेको मर्काअनुसार उनले गेडागुडी र दूध प्रशस्त खाई । मस्तसँग सुतेर बसी । तर उपचारका लागि क्वारेन्टाइन चाहारिनन् । सामाजिक सञ्जालमा रोगै नलागेपछि कोरोना टेष्ट गरेको भन्नेहरुको रवाफले उनलाई कुनै लछारपाटो लागेन । यदि उनले उनीहरुको ध्वाँसको फुर्तिसँग तँछाडमछाड गरी टेष्ट गराएकी भए, विचरीलाई त्यही आइसोलेसनमा झन कडाले कोरोनाले गाँज्ने थियो । यस्तै हतोत्साही बनाउने छिमेकी र आफन्तहरुका बीच कृषमायाले साँच्चै यो महामारीमा आफ्नो साहस देखाइन् । चारैदिनमा उनी राम्ररी तङ्ग्रिइन् । मात्र उनी ब्युटिपार्लर गएकी थिइन् । त्यो नै उनको सकसको घाँडो भएको थियो । आइमाई न हुन् गफ गर्न त कसले सक्ने हुन् । आज त्यही गफले उनलाई पोलाइको पीडा भो ।
चारदिनपछि तेस्रोपल्ट फेरि उनलाई त्यही माथिका ४ लक्षणहरु देखापर्यो । उनले पार्लर नगई अब भने सानो कपालकाट्ने मेसिन ल्याएकी थिई । तर तरकारी किन्न गएका ठाउँमा हूल बाँधेर कुरा गरेर आएकी थिई । यसपाली उनको माथिका यी लक्षण बाहेक पेट बाउँडिन थाल्यो । रातभर उनलाई धेरै छट्पट् भयो । छिमेकी आफन्तले जत्ति नै उक्साए पनि यसबेला पनि उनले आरडिटी अनि पिसिआर गर्न गइनन् । किनकी यो परीक्षण गराएर अपौष्टिक भएर कोरोनाले गँजाउन उनलाई मञ्जुर थिएन । यसपाली उनले ज्वरोको र टाउको दुखेको औषधि मत्र खाई । सास फेर्न गाह्रो हुँदा । प्राणायाम, अलोमविलोम प्रशस्त गरी । आफुजस्तैका अरु पीडाहरु सामाजिक सञ्जालमा अन्वेषण गरी । अरुलाई पनि व्युटिपार्लर नजान र तरकारी किन्दा हुल बाँधिएर नबस्न सामाजिक सञ्जामलमा चेतावनी दिइन् । न नै उनले पोजिटिभ कोरोना भयो भनेर फलाकिन् । “भयो त भयो आफुलाई यस्तै भयो भयो, औषधि पनि त विश्वमा कतै आएको छैन ।” भनी टेष्ट गराएर अझ भयो भनाएर थुनाएर बस्दा केही नहुने उनको अडान विचारणीय भयो ।
राज्यले यसपाली कारोनाको उपचार पनि आफै गर्नुनपर्ने भनी घोषणा गरे । तर जनताहरुले उपचारको व्यवस्था भएन भनी विरोधमा स्वर उचाले । प्रधानमन्त्रीले सुद्ध उपचार निःशुल्क गराउन आदेश दिए तर किन हो किन निःशुल्क उपचारको व्यवस्था अझै भएन । यस्तोमा कृषमायाको दूरदर्शीता सह्राहनीय थियो । उनले आफुले यदि खर्चै गर्नु छ भने किन अस्पतालको बेडको खर्च, अनि पिसिआर र रेपिड टेष्टको पैसा नजोगाउने ? भन्ने अडान बडो मार्मिक एवम् सबैले मनन गर्नुपर्ने किसिमको थियो ।
यस्तैमा युरोपमा "फेरि दाेस्रो चरणमा महामारी प्रवेश" भनिरहँदा पनि फेरि ४दिनमा उनलाई चौाथो पटक कारोनाले गाँज्यो । प्रमाण त्यै माथिका लक्षणहरु उनमा देखापर्यो । यसबेला उनलाई लाग्यो कि यो कोरोनाभाइरस हाम्रो शरीरबाट हट्यो भन्दा पनि निष्क्रिय भएर बस्दो रहेछ । अनि फेरि आफु दुर्वल हुँदा सक्रिय भएर गाँज्दो रहेछ । तर वास्तबमा उनले विहानको समयमा हतरपतर बाहिर दूध किन्न जाँदा मास्क लगाउन विर्सिएकी थिई ।
विचरी ! यसपाली पनि छट्पट् भई । आफन्तहरु यही बेला मेरो यत्ति खर्च भयो आइसोलेसनमा । मेरो पोजिटिभ भयो भनी डिँग हाँकिरहेका थिए । सहयोगी हातहरुको कतै मेसो थिएन । उनलाई यसपाली पनि सास फेर्न गाह्रो भयो । आन्द्रा बटार्ने गरी दुख्यो । छटपटको सकसले उनलाई पिरोल्यो । फेरि भोको पेटमा खान हुने औषधि थिएन । खाना टन्न खाइन् अनि ज्वरोको, टाउको दुखेको अनि आउँको औषधि खाइन् । आफुले खाँदै गरेको निन्द्राको औषधि पनि यसपाली उसले खाइन् । तरै पनि सञ्चो भएन, रातमा उसले अलाेमविलोम गरिन् तैपनि सञ्चो भएन ।
उनलाई यसबेला पछुतो भयो कि उसले तातोपानी खाइरहन नछोड्ने, बाहिर जाँदा जुनसुकै समयमा हतार भएपनि मास्क लगाउने अनि बाहिर जाने व्यागमा अलग्गै नछुटाउने, कतै बजार जाँदा हुल भएको छ भने समयको ख्याल नगरी पर्खने, सरसफाइमा ध्यान दिने प्रण गरिन् । कृषमायाको यो स्ववास्थ्यसँस्थाहरुको व्यापारमाथिको प्रहार अनि दनकलाई सबै आफन्त अनि छिमेकीहरुले मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरे । कारण यसै मेसोमा स्वास्थ्योपचार गर्न अस्पतालमा नीजि स्वास्थ्य क्लिनकमा गएको भन्ने छिमेकी अनि आफन्तहरु प्रायः कोरोनाले गालेको विछट्ट महामारी भएको समयमा अस्पतालको प्लाष्टिकको पोकामा प्याक भइसकेका थिए ।
उनी यत्तिबेला तातो पानी छिनछिनमा खान्छिन् ।उनलाई चौँथोपटक कोरोनाले गाँजेर निको भएको दुई महिनाको अवधि भइसक्यो कोरोनाको कुनै लक्षण देखा परेको छैन । उनले अफिसको काम पनि आफ्नै कोठामा गर्दै आएकी छिन् । सबै कुरा उनले डिजिटलमै सकेसम्म इन्टरनेटमै गर्छिन् । सबैलाई आफ्नो अनुभव सुनाउाछिन् । मास्क छुटाउँदिनन्, सामाजिक दूरी कायम राख्छिन् , सरसफाइ हरदम गरिरहन्छिन् ।
२०७७ कात्तिक १२
कोरोना, करप्सन र किसान-मजदुर
सायद तिम्रो र हाम्रो बाटो फरक छ होला
चारिटा मैथिली हाइकु - १६ (वैशाख–जेठ)
सिमानामा अब एउटा
१६ अक्षरे वार्णिक छन्द कविता
कल्पनामा रात बित्यो